WHO waxay dooneysaa ku-deeqidda 1 bilyan oo tallaal oo ah tallaalka COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Caafimaadka Warka » WHO waxay dooneysaa ku-deeqidda 1 bilyan oo tallaal oo ah tallaalka COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Xaqiijinta in dhammaan kuwa adduunka oo dhan ay aad ugu nugul yihiin saameynta fayraska, oo ay ku jiraan shaqaalaha daryeelka caafimaadka, dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurada halista ah, si dhakhso ah loo tallaali karo waa tallaabo muhiim u ah xakameynta masiibada.
Xawaaraha dib-u-qaybsiga tallaalka COVID-19 ee ka imanaya dakhliga sare ee dalalka dakhligoodu hooseeyo aad buu u gaabiyaa.
Wadamada hodanka ah ayaa lagu booriyay inay ku deeqaan ugu yaraan 1 bilyan oo ah tallaalka COVID-19.
Illaa iyo hadda, 92 waddan ayaa qaatay ilaa 89 milyan oo tallaal ah.
Ellen Johnson Sirleaf, Madaxweynihii hore ee Liberia, iyo Helen Clark, Ra'iisul Wasaarihii hore ee New Zealand, ayaa walaac xooggan ka muujiyay gaabiska tallaalka dib-u-qaybin laga helo dakhli badan dalalka dakhligoodu hooseeyo.
Labada hoggaamiye ee hore waxay wada-shaqeeyeen guddoomiyeyaasha Guddiga Madaxa-bannaan ee Diyaar-garowga iyo Ka-jawaabidda Faafa (IPPPR), oo ay bilaabeen Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) bishii Luulyo 2020. Warbixinteedii ugu dambaysay waxaa la daabacay May.
“Warbixinta Guddiga Madaxbannaan waxay ku talisay in waddamada dakhligoodu sarreeyo ay hubiyaan in ugu yaraan hal bilyan oo tallaal oo la heli karo loo qaybiyey 92 waddan oo dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah 1-da Sebtember, iyo hal bilyan oo dheeri ah badhtamaha 2022”, lagu dhawaaqay.
"Xaqiijinta in dhammaan kuwa adduunka oo dhan ay aad ugu nugul yihiin saameynta fayraska, oo ay ku jiraan shaqaalaha daryeelka caafimaadka, dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurada halista ah, si dhakhso ah loo tallaali karo waa tallaabo muhiim u ah xakameynta masiibada."
Illaa iyo hadda, hindisaha midnimada adduunka ee COVAX wuxuu soo diray 99 milyan oo qiyaasood oo deeq ah, ayay yiraahdeen. In kasta oo 92 dal ay heleen ilaa 89 milyan oo tallaal, haddana tani aad bay uga yar tahay hal bilyan oo loogu baaqay warbixinta.
“Dalalka dakhligoodu sarreeyo waxay dalbadeen in ka badan laba jibaar qiyaasta loo baahan yahay dadkooda. Hadda waa waqtigii aan u muujin lahayn midnimo kuwa aan weli awoodin inay tallaalaan shaqaalahooda caafimaad ee safka hore iyo dadka ugu nugul, ”ayay sheegeen hoggaamiyeyaashii hore.